Munaasabad lagu taageerayo sanadka Al-shabaab ay ka bexeen Muqdisho oo ka dhacday stadium Muqdisho. Views:82 | Monday, August 6th, 2012 | By somaliraddio
Banaan bax ballaaran oo ay ka qeyb galeen kumanaan dadweyne laguna taageerayay sanad-guuradii 1aad ee ka soo wareegatay markii Al-Shabaab ka baxeen magaalada Muqdisho qeybo ka mid ah ayaa maanta lagu qabtay Garoonka Ciyaaraha ee Stadium Conis, iyadoo uu ka qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Isu soo baxan oo uu qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qeyb galay dadweyne fara badan oo ka kala socday 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir iyo Mas'uuliyiin, iyadoo dadka ay wateen hidiaha iyo dhaqanka, Calanka Soomaaliya, waxaana dibad baxayaasha ay sidoo kale wateen Sawirka Madaxweynaha.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur "Tarsan" oo ka hadlay isu soo baxa ayaa sheegay in lixda Agoosto ay maalin weyn ku tahay shacabka ree Muqdisho, isagoo madaxweynaha ka codsaday in maalintaan loo asteeyo maalinta nabadda Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu maleeshiyaadka Shabaab ku eedeeyay in ay dhibaato u geysteen shacabka iyo magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/samad Macalin Maxamuud ayaa sheegay in maleeshiyaadka Shabaab aysan isaga bixin magaalada ee ay ka saareen ciidamada Qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna sidoo kale shacabka iyo ciidamada qalabka sida ku amaanay sida wanaagsan ee ay uga wada shaqeeyeen ammaanka iyo la dagaalanka maleeshiyaadka Shabaab.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ahna wasiirka difaaca Xuseen Carab Ciise oo ka hadlay isu soo baxa ayaa tilmaamay in horumarka dhinaca ammaanka ee dalka ka dhacay ay sabab u tahay dadaalka ay muujiyeen ciidamada Qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan difaaca waddanka iyo ilaalinta nabadda magaalooyinka.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeediyay isu soo baxa ayaa sheegay In dad badan aysan maleyneynin in magaalada Muqdisho ay nabad ka noqoneyso dhibaatada muddada ka jirtay, kuwo kalena aysan rumeysneyn in laga guuleysan karo maleeshiyaadka Shabaab iyo ururka Al-Qaacidda oo ku soo duullay shacabka Soomaaliyeed, Hase yeeshee arrimahaasi ay dhaceen.
Khudbaddiisa ayuu madaxweynuhu ugu mahad celiyay dhammaan dowladihii ku caawiyay Soomaaliya in ay ka adkaato Al-Qaacidda iyo kuwii ka caawiyay dhinaca ciidamada sida dowladaha Uganda, Buruundi, Jabuuti iyo Kenya.
Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale ka hadlay horumarrada laga sameeyay dhinacyada siyaasadda iyo horumarka bulshada, isagoo caddeeyay in loo baahan yahay in la dhammeystiro hannaanka loogu gudbayo dowladnimada, isla markaana la sii adkeeyo guulaha laga gaaray ammaanka iyo dib u heshiisiinta.
Shacabkii ka soo qeyb galay isu soo baxa ayuu madaxweynuhu kula dardaarmay in ay wax kasta ka hormariyaan nabadda, taas oo uu sheegay inay mudan tahay in loo huro wax kasta.
Kooxaha fannaaniinta Waaberi, Heegan iyo Iftin ayaa goobta ku soo bandhigay heeso iyo ruwaayado ka tarjumaya ahmiyadda ammaanka, waddaniyadda iyo waliba waxqabadka madaxweynaha Soomaaliya mudane Shariif Sh Axmed.